ဆာလောင်မွတ်သိပ်ပြီးအိပ်စက်ခြင်း၏ဆိုးကျိုး – MyHealth Myanmar
ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်းက လေ့လာသင်ယူခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းအပေါ် အပျက်သဘောဆောင်ပြီး စိတ်ကျရောဂါဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ သုတေသီ များက အဆိုရှိခဲ့ကြပါတယ်။ လူအများစုကအိပ်ရာဝင်ခါနီးအဆာခံခြင်းကဝိတ်ကျစေတယ်လို့ထင်နေတုန်းပါပဲ။ သို့သော် သုတေသန ပညာရှင်များက အဆာခံပြီး အိပ်စက်ခြင်းက များစွာသောဆိုးကျိုးကို ဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဆိုတာကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
သင်တို့ ဗိုက်အဆာခံပြီး အိပ်ရတာ ဘာကြောင့်မကောင်းတာလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာနှင့် သင်တို့ရဲ့စိတ်ကို ပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့် ဒီကနေ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ညစာမစားခြင်းကကောင်းပေမယ့်ညဘက်တွင်ဆာလောင်မွတ်သိပ်တတ်တာကြောင့် ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့ဖိအားမျိုး ကိုယ့်ကိုယ်ကို မဖြစ်ပါစေနဲ့။
ဟုတ်ပါတယ်။ အဲဒါဟာဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။အိပ်ရာမဝင်ခင်အစာမစားခြင်းက ကိုယ်အလေးချိန် မြှင့်တင်ပေးတဲ့ လေ့လာမှုများက အငြင်းပွားဖွယ်ရဖြစ်ပါတယ်။သင်ကအဆာခံပြီးနေပေမယ့် ဗိုက်အရမ်းဆာလောင်ပြီး ထစားလိုက်မိပါက ပို၍ဆိုးကျိုးကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ တနည်းပြောရရင် အစာစားချင်စိတ်က သွေးဆောင်မှု နှစ်ဆဖြစ်စေပြီး သင်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအတွက် ကိုယ်အလေးချိန်ကို ပိုတိုးလာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိပ်ရာမဝင်ခင်အစာကိုစားသင့်တယ်လို့လည်းမဆိုလိုပါ။ ဒါပေမယ့် မအိပ်ခင် ၂-၃ နာရီလောက်ခွာပြီး အစာစားပေးတာက ပိုပြီးကျန်းမာစေပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့အများစုက ဆာလောင်မွတ်သိပ်ပြီး အိပ်ရာဝင်တာကိုကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးကြမှာပါ။ သင်၏အစာအိမ်က မြည်နေပြီး သင်၏တစ်ခုတည်းသော အတွေးမှာနံနက်စာကို ဘယ်လိုတွေစားနေတယ်ဆိုတဲ့အထိ တွေးနေမိမှာပါ။အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင် သင်အိပ်ပျော်နိုင်ဖို့အချိန်များစွာယူရမှာပါ။ ထို့ကြောင့်သင်ကောင်းစွာအိပ်ချင်လျှင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအငတ်မခံနေပါနဲ့လို့ကျွမ်းကျင်သူများကပြောကြပါတယ်။ အကယ်လို့ သင်အိပ်ရာဝင်နေပြီး အချိန်မှာ ဗိုက်ဆာလာရင် အနည်းဆုံးပေါင်မုန့်စားမယ့်အစား သခွားသီးနှင့်ရေသောက်ပြီး ဗိုက်ဖြည့်လိုက်ပါ။
Source:Health,Diet,Fitness and workouts
အကယ်လို့ သင်အစာမစားဘူးဆိုရင် သင့်တနေ့တာအတွက် တက်ကြွစွာလှုပ်ရှားဖို့အတွက် လောင်စာဆီ ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကနည်းလမ်းဟောင်း တစ်ခုပေမယ့် နံနက်ခင်းမှာအင်အားအပြည့်ဖြင့်နိုးထဖို့က အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်လုပ်ရန် လိုအပ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဦးနှောက်လည်းလန်းဆန်းနေဖို့ လိုအပ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသီများကဆာလောင်ငတ်မွတ်ခြင်း၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းဖြစ်စေတဲ့အတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့သတိပြုမိကြပါတယ်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့က ညတွင်ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေပြီး မနက်တွင် လန်းဆန်းတက်ကြွစွာ အင်အားအပြည့်ဖြင့်မနိုးထနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်ခွင်မှာ အလုပ် ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
အိပ်ရာမဝင်မီအစာစားခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီးသင်ဘယ်လိုထင်ပါသလဲ? နောက်ပြီးအိပ်ရာမဝင်ခင်ဘယ်နှစ်နာရီလောက်ခွာပြီး သင်အစာစားပါသလဲ? အဲဒါလေးတွေကိုပြန်စဉ်းစားပြီး သင်၏အကြံဥာဏ်များရှိရင်ကျွန်ုပ်တို့ကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလို့ရပါတယ်နော်…
MyHealth Myanmar2022-03-31T06:29:35+06:30April 2nd, 2020|Health, Hungry, Sleep|